Coachinchina Archives - Ny Tany Masin'i Vietnam Studies
Sokajy LA COCHINCHINE dia misy lahatsoratra fampahafantarana ny firenena Cochinchina nandritra ny fanjanahantany frantsay.
Ny faritanin'i Longxuyen dia voafatotry ny faritany Chaudoc, Rachgia, Cantho, Sadec ary Tanan, ary mitana ny velaran-tany 120.432 ha ao amin'ny faritra andrefan'ny Cochin-China.
ANDRO NINH - Cochinchina
Ny faritanin'i Tayninh dia manana faritra miezinezina manodidina ny 450.000 ha, ary teratany avaratra sy andrefan'i Kambodza, any atsimo, ny faritanin'i Giadinh, Cho Lon sy Tanan ary any atsinanana eo amoron'ny ony Saigon.
Ny faritanin'i Baria dia any atsinanan'i Cochin-China.
Ny faritanin'i Bentre dia noforonin'ny nosy roa: ny nosy Minh, izay misy eo anelanelan'ny Co Chien sy ny renirano Hamluong, ny tapany avaratra izay an'i Vinhlong, ary ny nosy Bao, eo anelanelan'ny Hamluong sy Balai.
Ny tanàna lehibe ao amin'ny faritany Hatien dia mipetraka eo amin'ny fidirana amin'ny lemaka malemy, eo amin'ny Hoalan'i Siam, avaratra-andrefan'ny morontsirak'i Cochin-China, ary 6km miala ny sisin'ny Kambojiana.
Faritanin'i Rachgia, mponina 235.000. Rachgia lehiben'ny tanàna na vohitra ao Vinh Than Van.
Ny faritany Baclieu dia misy eo amin'ny 8 ° 30 sy 9 ° 30 latitude avaratra, ary 102 ° 20 ary 104 ° longitude atsinanana.
Ny faritanin'i Travinh dia voafatotra avaratra amin'ny faritanin'ny Co Chien.
Ny faritanin'i Soctrang dia manana faritra 238.000 hektara ary ny faritra rehetra ao dia efa nampiasana, ary saika voasarika tanteraka.
Mipetraka any avaratra-andrefan'ny Cochin-China, ny faritanin'i Chaudoc dia voafatotra avaratra sy andrefan'ny Fanjakan'i Kambodza.
Lý Toét ao an-tanàn-dehibe: fahatongavan-dàlana miaraka amin'ny maoderina tamin'ny taona 1930 tany Vietnam - Fizarana 2
Comments Off amin'ny script Demotic NÔM
ORIENTALISTA frantsay - Fizarana 1
Comments Off ao amin'ny French ORIENTALIST - Fizarana 1
FITENY VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny - Dialogue: GREETING - Fizarana 5
Comments Off momba ny LANGUAGE VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny - Dialogue: GREETING - Fizarana 5
Ny FIVORIANA FIVORIANA amin'ny taonjato faha-15
Comments Off amin'ny FINOANA CONFUCIANISM tamin'ny taonjato faha-15